Mid ka mid dowladaha horumaray ee caalamka oo malaaayiin dollar ugu deeqay dowlada Somalia. | Risala FM-The Voice of Horn Africa
Mid ka mid dowladaha horumaray ee caalamka oo malaaayiin dollar ugu deeqay dowlada Somalia.
U-qeybsanaha Arrimaha Caalamiga ee Ra’isul-wasaaraha dalka Japan, Mr Kawai Katsuyuki ayaa ku dhawaaqay inay ugu deeqeen Dowladda Federalka Somalia lacag dhan 37 million oo Doollar.
Yaboohaasi ayuu Mas’uulkaasi kaga dhawaaqay mar uu Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kula kulmay caasimadda dalka Ethiopia ee Addis Ababa, kana wada hadleen Xiriirka iyo Iskaashiga Labada Waddan.
Lacagtaasi ayaa la sheegay in loo adeegsan doono Adeegyadda Aasaasiga, Amniga iyo Horumarinta Dhaqaalaha Somalia.
Afhayeenka Madaxtooyadda Somalia Daa’uud Aweys ayaa sheegay inay Dowladda Japan doonayso inay xiriir dhow oo dhinacyadda Iskaashiga iyo Maalgashiga la yeeshaan Somalia.